नेपाल र कुवेतबीचको खेल दशरथ रंगशालामा नहुने- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
नेपाल र कुवेतबीचको खेल दशरथ रंगशालामा नहुने
काठमाडौँ — नेपालले विश्वकप २०२२ छनोटमा कुवेतविरुद्धको घरेलु खेल देशबाहिरै खेल्नुपर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दशरथ रंगशाला तयार नभएको एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले ठहर गरेपछि नेपालले घरेलु खेल तटस्थ भूमिमा खेल्नुपर्ने भएको हो ।
रंगशालामा आगामी मंसिर ३ गते नेपाल र कुवेतबीच फुटबल खेल तालिका थियो । २०७२ बैशाख १२ पछि दशरथ रंगशालामा पहिलोपल्ट खेल आयोजना हुँदै थियो । खेलको पूर्व तयारीअनुसार शुक्रबार रंगशालाको फ्लडलाइट परीक्षण पनि गरिएको थियो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दशरथ रंगशाला तयार नभइसकेकोले कुवेतविरुद्धको खेल तटस्थ भूमिमा खेल्नुपर्ने भएको जनाएको छ । एएफसीका प्रतियोगिता समितिका देङ सिओ लोङले मंगलबार दिउँसो आएर दशरथ रंगशालाको निरीक्षण गरेका थिए । उनकै प्रतिवेदन अनुसार एन्फालाई नेपालको ‘होम म्याच’ तटस्थ भूमिमा खेल्न एएफसीले निर्देशन दिएको हो ।
छनौट उक्त खेल नेपालले भुटानको चाङ्गलिमिथाङ्ग रंगशालामा सञ्चालन गर्नका लािग फिफा र एएफसीसँग प्रस्ताव गरिएको एन्फाले जनाएको छ ।
यस्तै,समयमा नै रंगशाला पुनःनिर्माण हुन नसकेको भन्दै क्षमायाचना मागेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ १५:४४
उपचुनाव : बागलुङमा आठ दल र २ स्वतन्त्र उम्मेदवार
कार्तिक २१, २०७६ प्रकाश बराल
बागलुङ — बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ (ख) को प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ८ वटा दलले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
बिहीबार कार्यकर्तासहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनीहरुले उम्मेदवारी दिएका हुन् । दल बाहेक २ जनाको बागी उम्मेदवारी पनि परेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत बासुदेव न्यौपानेका अनुसार कांग्रेसबाट जीतबहादुर शेरचन र राष्ट्रिय जनमोर्चा(रजमो)को तर्फबाट खिमविक्रम शाहीको उम्मेदवारी परेको छ ।
समाजवादी पार्टीकाका अशोक कुमार विक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गणेशबहादुर कुँवर, राप्रपाकै संयुक्तबाट निमबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका यामबादुर आले, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अनिलकुमार राई र मंगोल नेशनल अर्गनाईजेसन पार्टीका मित्रबहादुर मगरले पनि उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
शाहीलाई सत्ताधारी नेकपाले साथ दिएको छ । निर्वाचनकै लागि स्वतन्त्र उमेदवारको रुपमा शेरमान घर्ती र सन्तोष भण्डारीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । घर्ती नेकपा कार्यकर्ता हुन् ।
कांग्रेसका उम्मेदवार शेरचन यसअघिको प्रसेदसभा निर्वाचनमा राजमोका उम्मेदवार टेकबहादुर घर्तीसँग पराजित भएका थिए । उनले कांग्रेसबाटै दोस्रोपटक टिकट पाएका हुन् ।
घर्तीको निधनपछि राजमोले सत्ताधारी नेकपाको समेत समर्थन पाएर शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको हो । घर्तीकी पत्नी उमेदवार बन्ने चर्चा चलेपनि राजमोले शाहीको नाम अन्तिम टुंगो लगाएको हो । यसअघि राजमोले ३ जना, नेकपाले ४ जना र कांग्रेसले ४ जनाको नाम केन्द्रमा सिफरिस गरेको थियो ।
यो क्षेत्रमा ३६ हजार ९ सय २६ मतदाताले मतदान गर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकासचन्द्र पौडेलले बताए । मनोनयन दर्ता भैसकेकोले शुक्रबारदेखि दलका प्रचारका अभियानलाई व्यवस्थित बनाउने र सुरक्षाका लागि व्यवस्था गरिएको प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले बताए ।
आगामी मंसिर १४ गते बागलुङकै बडिगाड गाउँपालिका वडा नं. २ मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ । वडा नं. २ का अध्यक्ष बिष्णु भुषाल जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा विजय भएपछि यहाँ अध्यक्ष पद खाली छ ।
मनोनयन दर्तासँगै राजनीतिक प्रचारका क्रियाकलाप सुरु भएका छन् । उम्मेदवारी दिएर फर्केपछि शाही र शेरचन दुवैले आफ्नो दलले जित्ने दाबी समेत गरेका छन् । अन्य साना दलले पनि प्रचारका अभियान भने थालिसकेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ १५:२१
बोस्टन म्याराथन नहुने